Musaveni iyo Musyoka oo maamuusay mooryaanta laakiin Maxamedyo waxaan Mela Zenawi ahayn maqliwaaye
Sidii horay loo sheegay waxaa la yiri ilmaha yari, bilaha ama sanadaha cimrigiisa ugu horreeya wuxuu aamminsanyahay in hooyadiis cid walba ka adagtahay. Waxaa cad in mararka qaarkood la arko ilmihii oo hooyadiis ku leh: hooyo aabbe iga celi. Laakiin marka dambe wuxuu ogaadaa in aabbuhu guriga mas’uul ka yahay. Hadduu magaalo joogana wuxuu indhaha kukala qaadaa dad magaaladaas xukuma oo ay waalidkiis ka dambeeyaan. Dabadeedna in madaxweyne jiro ayuu ogaadaa. Hadhowna wuxuu gartaa in Ilaahay Isagu koonka xukumo. Laakiin 13 jirka Xamar jooga wuxuu BBC-da ka maqlo ma ahane ma yaqaan guddoomiye degmo, gobol iyo madaxweyne midna. Dhallintaas labay u qaybsamaan. Min waalid ilaa Weyne (Allaah), kuwa kalana min waalid ilaa “warlord”. Ilayn dowlad ma jirtee kuwo waalidkood baa ku ababiyey sidii fiicnayd oo Ilaahay bay caabudaan qaarna markay dab ka beyreen bay mooryaan noqdeen oo waxa ku weyn qab-qablahooda waana kuwa ka mid noqonaya shuftadiisa. Shuftadaas dad baa u yaqaan “mujaahidiin” ama daraawiish.
Akhristayaal waxaa la sheegaa in markii la yiri waxaa la kordhinayaa ergada tegaysa Mombasa, in SRRC iyo G8 ay af labadii yeereen iyagoo leh: Itoobiya aan shir u tagno qolyahayaga raacsan! Qofkii leh caqli ku filan wuxuu markiiba garanayaa hadalkaas kore ee culumadu na soo gaarsiisay ee ah in wax walba ay soo maraan heerar. Haddaad aragto Maxamed Dheere ama Xasan Qalaad ama Qanyare oo cabaadaya, hala yaabin una garoow. Siyaasaddoodu xaggay joogtaa? Yaa sameeyey? Kollay Qanyare maahayn inuu saacaddan halkaas joogo oo waxaa laga filayey meel ka korraysa laakiin waxaan arki jiray Dr Dooloow oo aqoon yaraan ku eedeeya. Waxaan hadda is-leeyahay Dr Doolow faruhuu ka qaaday markii Qanyare uu qayiray siyaasaddiisii hore. Ma xassuusataan farshaxankii Amiin Caamir ee ahaa Zenawi oo naaso badan leh oo nuujinaya qab-qablayaal badan? Marka ilmaha da’daas ku jira wax ku dhacaan hooyadood bey u cararaan. Marka ma la yaabteen hadday dhaheen Itoobiyaan rabnaa?
Soomaalidu waxay tiraahdaa gaal dil gartiisana sii. Muuse Suudi iyo saaxiibadiis waxay naga badbaadiyeen shirqoolkii Itoobiya. Muuse Suudi ceeguu ku dhegay Carta iyo coomaadigii Zenawiba. Qabiilkii Itoobiya naga qabta ayaa sharaf yeelanaya. Kollay annagu sharaftaas ka qadnay.
Marka “Britian” laga hadlayo “England” iyo “Scotland” waa simanyihiin laakiin marka Soomaaliya laga hadlayo “Puntland” iyo “Highland” waan ku wareeray. Somaliland way ka xishootay inay la baxdo gobol wata “land”. Iga raali ahaada gobolada Somaliland ma aqaan tiradooda (waa kuwii la sameeyey dowladdii Maxamed Siyaad ka dib). Waxaan maqlaa inuu jiro Saaxil laakiin waxaan u qaatay inaan “land” la socon. Waxaa halkaas kaaga cad in siyaasadda Puntalnd aan la fahmi karin oo ay fidradiiba ka tageen. Haddaad qaarkood weydiiso hogaamiyahooda waxay ku oran “madaxweynahaa”. Habeybnkii dhowaa yaa “madaxweynaha” kula shirayey hoteel “Intercontinental”? Madaxweynaha Maraykanka? Midowga Yurub? Jaamacadda Carabta? Uruka Midowga Afrika? Mayee Maxamed Cumar Xabeeb, Shaatiguduud, Moorgan, Xasan Qalaad! Maxaa loo dhahaa shimbirba shimbirkiisuu la duulaa? Ama dheh ii sheeg saaxiibkaa aan ku sheego kaa tahee. Shaatiguduud haddii la sheego waa inaad shaybka Puntland sheekadiisa heyso. Bal ila fiiri casuumaddii Musaveni laga sheegay. Waa labo kooxood:
· Maxamed Dheere
· Maxamed Qanyare
· Cumar Filish
· Xuseen Caydiid
· C/hi Yuusuf
· Muuse Suudi
· Cismaan Caato
· Barre Hiiraale
· Maxamed Xaabsade
· Faarax Sendiko
Haddii madaxweynayaasha Afrika shirayaan, kan Jibuuti iyo kan Suudaan waa labo madaxweyne oo waxaa la oran madaxweynayaasha, isku si baana loo soo dhaweyn iyadoon loo fiirin dal weyni iyo wax kale midna. Haddii ay Kampala tagaan 12-kaas nin, Shaatiguduud oo aan gacanta wax ku heyn iyo kornayl C/hi waa simanyihiin oo waa hogaamiye kooxeedyo. Haddii idaacad, teleefishan ama joornaal wax ka qoro waxaa loo arkayaa dad isu dhigma oo Soomaaliya ka socda. Daahir Riyaale waa nin nabad-sugid soo maray oo inuu meel la istaago waa ka xishoonayaa ilaa loo yeerto markii la helo qof Koonfur matali kara. Marka horumarka ay Puntland gaartay waxaa ka mid ah in “madaxweynahoodii” uu “mudanayaal” kale shir la fadhiyo! Waxaa halkaas ku baxaya sheekada reer Puntland qaarkeed ee ah in C/hi wax yahay, dadka kalana wax kale. Marka haddii C/hi madaxweyne yahay haddee Cumar Filishba waa madaxweyne. Maaddaama labadooduba xoog wax ku xukumaan, ma kan dadka badan dhaca oo xooga baa fiican mise kan dad yar dhiba?
Waxaan isha mariyey qaar ka mid ah boggagga Soomaalida intaanan maqaalka bilaabin. Waxaa isoo jiitay sida wax garadka Karanle ay u waaniyeen Qanyare iyagoo siiyey talooyin wax ku ool ah hadduu wax ku qaadanayo. Fiiri bogga Deyniile. Nasiib-darro reer Puntland wey gabeen inay hogaamiyahooda la tashaan. Ilaahay ma solonsiin kuwa taageera, dadka intiisa kalana wey la rabaan inuu ceelkaas ku dhaco.
Horta qofkii raba inuu siyaasad galo waa inuu qab lahaado. Muuse Suudi markuu lahaa ninoowna kabo kaa weyn ha geshan muxuu ka waday? Horta wuxuu ka dabaakhayey hadalkii C/hi, ee Muuse wax ma tusay C/hi? Inkastoo cawaan ay Muuse isku cidyihiin C/hi cudud u yihiin laakiin Muuse ciidduu la galay C/hi. Haddii Muuse qabiilkiisa keliya wax u ogolyahay ka warran ninkaan qof aan isaga ahayn wax u ogolayn? Waa C/hiye. Xittaa qabiilkiisa wax uma ogola. Ma ogola inay soo dhinac fariistaan Maxamed Cabdi Xaashi, Cadde Muuse, dad ka socda “Highland” iyo kuwo ka socda Galdogob toonna.
Muuse Suudi iyo Maxamed Dheere oo u ordayey Abgaal orodka 10,000 mitir (10 Km), inkastoo garoonka yar ee Mbagathi ku yaal lagu war-wareegayo, Muuse wuu gartay in 10 Kiilomitir aysan ahayn wax sahlan aysanna ka yarayn “Xamar iyo Calilaayo inta u dhaxaysa oola-laalaabay” laakiin Maxamed Dheere wuxuu u qaatay wax sahlan oo waxaa siray garoonka lagu wareegayo oo wuxuu u qaatay inaysan dhib lahayn.Waakaas iyadoon 5000 mitir la ordin Maxamed Dheere leh: Itoobiya na geeya aan ku soo nasannee!
Maxaa ka maqan mooryaanta? Haddii Musaveni iyo Musyokaba maamuuseen oo toodii loo fuliyey maxay rabaan? Haddii Muuse iyo C/Qaasim wax loogu roonaaday oo toodii loo mariyey, yey yihiin? Hogaamiyayaashaa 12-kaa imisaa Hawiye ah? C/hi iyo Cumar Filish isu tuura, Shaatiguduudna wax ma haysto, Barre Hiiraale iyo Xaabsadana isku xulufaad tihiin marka qeybta taas ka fiican oo aad rabtaan maxay tahay?
Horta Zenawi wuxuu ku sirmay seddex-geeska Barmuuda (Muuse, C/Qaasim iyo Caato). Waxaa intaas dheer waxay mingiskii iyo booramihii hayey ka cuudsheen C/hi Yuusuf. Bal suurayso C/hi oo Maxamed Dheere ku leh yaan shirka laga bixin! Muxuu ka wadaa? Waxaan filayaa inuu talo ka helay taageerayaashiisa oo goor dambe wax fahma. Waxaa dhici karta inay ku dhaheen war Muuse iyo C/Qaasim kaa raayee bal ka fiirso waxaad ku hadlaysid kadib markuu afka la galay Musyoka. Waxay dhaheen mar dambe yaan diidmo ama caay lagaa maqal. Waxay u sheegeen inuu adeegsado Maxamed Dheere iyo Xasan Qalaad ama Qanyaraba. Soow meydaan arag isagoo leh waxaan noqon kan ugu dambeeya ee shirka ka baxa? Isagoo ah ninka abaabulay shirarka la rabo in lagu qaadaco in wax la kordhiyo, haddana waa isla asaga ninka ku leh Maxamed Dheere iyo Qalaadoow is-tartiibiya! Hadduu baranayaaa sida siyaasadda loo ciyaaro.
Runtii Muuse iyo C/Qaasim ma gilgilin Zenawi kaliyee waxay ka yaabiyeen Somaliland. Waxaad mooddaa inay soo afjarmayso riyadii ahayd goosashada. Horta sidii la rabay haddii la heli waayo waxaa la raadshaa sidii laga badinwaayo. Waxaan dadweynaha Hawiye weydiinayaa, halkaas waxaa yaal waxaan ugu yeero seddex-geeskii Bermuuda (Muuse, C/Qaasim iyo Caato) oo cashar siiyey Zenawi iyo C/hi, xagga kalana waxaa ah sambuus (Xuseen Caydiid, Maxamed Dheere iyo Qanyare) oo nafta kusoo ceshay Zenawi iyo C/hi. Marka kee qaadanaysaan? Mise waa labo daran mid dooro? Ma garanayo in oraahdan English ah iyo taasi isleedahay “between the devil and the deep blue sea” waxay adeegsadaan markii xaaladu marayso labo arrimood oo aan labadaba la liqi karin.
Sidoo kale waxaan dadweynaha kale ee Soomaaliyeed weydiinayaa maxay SRRC u diiday in la keeno dad kale oo Soomaaliyeed oo aan shaqo ku lahayn qab-qablayaasha sida C/Risaaq Xaaji Xuseen iyo Nuuradiin Faarax? Sidoo kale waxaan IGAD u sheegaynaa inaan sheekada SRRC iyo waxa taageera la aqbali karin. Waxaan rabnaa inaan baraxno caqli-xumadooda oo ergada lagu soo daro dad macquul ah. Hadday diidaanna iyagaa cirka roob ku og.
Waxaad mooddaa in dadweynaha Soomaaliyeed danaynayaan arrinta Musaveni iyo Musyoka si ka badan sidii ay u danaynayeen markii Zenawi joogay. Marka labadaas nin waa inaysan meeshii hore nagu celin.
Seddex-geeska Bermuuda waxay noqdeen libaaxii Soomaaliya kadib markii dhurwaagii (Kiplagat) uu wax qaybshay laakiin waa la ogaa dharbaaxadii ku dhacday. Ma idin latahay in Musyoka uu ka liidan doono dawacadii? Suurtogal ma ahan. Markii ninkii qab leh ayaa qeyb qaadan kara.